Jimicsiga Jirka & Faaiidooyinkiisa - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Jimicsiga Jirka & Faaiidooyinkiisa
Sida ay qorayaan daqaatiirta iyo waxgaradka reer galbeedka jirka bini’aadamka wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 30daqiiqo oo jimicsi ah. Taas oo ka baxsan howlaha uu qofkaasi daily u qabto, qaasatan dadka ku nool qurbaha oo aad moodo inay sii curyaamayaan maalin maalinta ka danbaysa iyadoo oogu wacantahay qaab nololeedka wadaman. Dhaqaatiirta ayaa aad waxay oogu waaniyaan dadka inay isku dayaan inay ku daraan ugu yaraan 30 daqiiqo ama ka badan oo socod ah hadii aadan waqti u hayn exercise kale. Arintan oo cilmi baadhis lagu cadeeyey inay faaiidooyin badan u keento qofka Jirkiisa, niyadiisa iyo maskaxdiisay.
Faaiidooyinka uu leeyahay jimicsigu oon halkan ku soo koobi karin ayaa waxaa ka mid ah:
In qofka maalintii jimicisada 30 daqiiqo ama ka badan uu ka badbaadi karo cudurada ku dhaca wadnaha.
In qofku uu dhimi (blood pressure) ama dhiig karka waxaan u naqaano.
In jimicsigu uu ka hortag u yahay cuduro badan sida sonkor macaanka (diabetes), buufis (depression), obesity, etc.
Maadaama aan in badan maqalo faaiidooyinka Jimicsiga jirka bini’aadamka maxaa ka hortaagan dhalinyarada iyo duqaydaba inay waqti galiyaan caafimaadkooda. Soomali hadaan nahay hadii qofka xanuunsanyahay waxaan jecelnahay inaan dhaqtarka gayno; balse ma jeclin inaan practice garayno ka hortaga. Jimicsi maalin walba 30daqiiqo si aad naftaada ooga badbaadiso cuduro faro oo dilaa ah….